Ahoana ny fomba fampandehanana ny Microsoft Office 2016 mandrakizay - VidaBytes | LifeBytes
Ahoana ny fomba hampiasana ny Microsoft Office 2016 mandrakizay
Networks ao amin'ny tambajotra | | Office
Angamba ianao mieritreritra fa ny fampihetsehana ny Microsoft Office 2016 Sarotra izany, saingy milaza aminao izahay fa tsy mbola mora toy izany taloha. Azonao atao ny mampiasa ny birao mpikatroka 2016 haingana amin'ny alàlan'ny fomba isan-karazany. Na izany aza, alohan'ny hanazavana ny fomba hampiasana azy dia ilaina ny miresaka voalohany Microsoft Office 2016 ary inona no atolotray.
1 Inona ny Microsoft Office 2016?
2 Ahoana ny fomba hampiasana ny birao maimaim-poana?
2.1 Fomba voalohany: ny birao serial 2016 standard ary matihanina miampy
2.2 Lisitry ny lakilem-bokatra ho an'ny Microsoft Office 2016:
2.3 Key MS Office 2016:
2.4 Lakilen'ny vokatra MS Office maimaim-poana:
2.5 Fanalahidin'ny vokatra ho an'ny Microsoft Office 2016:
2.6 Nomery Serial an'ny MS Office 2016:
2.7 Torohevitra famokarana birao feno 2016:
2.8 Fomba faharoa: mampihetsika ny birao 2016 tsy misy programa amin'ny alàlan'ny fisie .bat
2.8.1 Araho ny dingana eto ambany hampavitrika ny Microsoft Office 2016:
2.9 Fomba fahatelo: amin'ny alàlan'ny KMS Pico
2.9.1 Dingana handefasana ny mpikatroka birao 2016 feno:
3 Fomba fahaefatra: fampandehanana ny Office 2016 Professional miampy sy fenitra amin'ny alàlan'ny Microsoft Toolkit
3.1 Araho ireto dingana ireto mba hampidinana sy hametrahana Microsoft Toolkit hampiato ny Microsoft Office 2016
4 Ahoana ny fomba fampiasa ny Office 2016
5 Fanontaniana napetraka matetika momba ny fampiatoana ny birao Microsoft 2016
5.0.1 Azo antoka ve ny mampihetsika ny Microsoft Office amin'ny fampiasana ireo fomba ireo?
Inona ny Microsoft Office 2016?
Microsoft Office 2016 Ity dia kinova an'ny suite famokarana Microsoft Office, saingy mahomby amin'ny Office 2013 sy Office for Mac 2011, ary mialoha ny Office 2019 ho an'ireo sehatra roa.
Ity kinova an'ny Microsoft Office 2016 Izy io dia aseho amin'ny endrika hita maso nohavaozina miaraka amin'ny fiasa vaovao sy ny endrika nihatsara. Anisan'ireo singa ampiasaina indrindra ho hitanao: Word, Excel, PowerPoint ary Outlook.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hahazo ny fampahalalana rehetra ilaina ianao misintona Office 2016 32 bits maimaim-poana amin'ny Espaniôla feno serial ary koa misintona Office 2016 64 bits maimaim-poana amin'ny Espaniôla feno serial. Aza adino ny mampidina ny fonosana izay mifanaraka amin'ny fikirakiran'ny solosainao.
Ahoana ny fomba hampiasana ny birao maimaim-poana?
Raha tsy manana fahalalana momba ny fomba fametrahana sy ampidino maimaim-poana ny Microsoft Office, tsy mila manahy ianao, amin'ity lesona ity dia hahazo ny fampahalalana rehetra ilaina tsikelikely ianao.
Androany dia misy fomba maro sy maro mampihetsika birao maimaimpoana fa mety tsy handeha daholo ny rehetra. Ny sasany nijanona niasa ary ny sasany tsy mifanaraka amin'ny rafitra fiasa manokana. Na izany aza, eto izahay mitondra anao fomba efatra izay tena miasa ary ankehitriny.
Fomba voalohany: ny birao serial 2016 standard ary matihanina miampy
Ny voalohany amin'ireo fomba dia amin'ny alàlan'ny lakilen'ny vokatra ary tsy inona izany fa ny andiana litera alfanumerika 25 eo ho eo. Lakilen'ny vokatra sasany ho an'ny Microsoft Office 2016 mazàna dia manana endri-tsoratra maro kokoa izy ireo. Ity lakile ity dia miankina amin'ny fomba nahazoanao azy. Eto ambany no hahitanao ny lisitry ny lakilen'ny vokatra hampavitrika ny Microsoft Office 2016:
Lisitry ny lakilem-bokatra ho an'ny Microsoft Office 2016:
Key MS Office 2016:
Lakilen'ny vokatra MS Office maimaim-poana:
Fanalahidin'ny vokatra ho an'ny Microsoft Office 2016:
Nomery Serial an'ny MS Office 2016:
Torohevitra famokarana birao feno 2016:
Mba hampavitrika azy amin'ireto lakile ireto dia tsy maintsy apetrakao aloha. Raha mbola tsy nametraka azy ianao dia izao no fotoana mety indrindra hanaovana an'izany. Faharoa, rehefa tafapetraka ianao dia tsy maintsy manomboka ny serivisy rehetra, omeko anao teny. Aorian'izany, rehefa manomboka serivisy dia hangataka anao avy hatrany a serial serial ary amin'io fomba io no ahafahanao mampihetsika azy. Na izany aza, raha tsy manontany izy dia araho ireto dingana ireto:
Tsindrio eo Archive ary mifidiana kaonty.
Mitadiava ny fivoriana «Solon'ny vokatra»E tsindrio eo io.
Ampidiro ny lakilen'ny vokatra ampidino ny Microsoft Office ary manamafy ny teny miafina.
Hisy hafatra hiseho «Microsoft Office 2016 dia navadika». Amin'izany no hanananao ny fonosanao Niasa ny Microsoft Office 2016 ary ho azonao atao ny miantehitra amin'ny fampiasa rehetra ao aminy.
Raha tsy mety aminao io fomba io, dia mbola tianao ihany hampavitrika ny Microsoft Office 2016, tohizo ny famakiana ireo fomba manaraka.
Fomba faharoa: mampihetsika ny birao 2016 tsy misy programa amin'ny alàlan'ny fisie .bat
Ity fomba ity dia somary tsotra kokoa nefa mahomby ho an'ny mampihetsika ny Microsoft Office tsy misy programa ary tsy misy lakilen'ny vokatra. Izy io dia misy ny fanatanterahana rakitra .bat efa voahidy taloha hampiharana ny Fampiatoana ny Microsoft Office 2016.
Araho ny dingana eto ambany hampavitrika ny Microsoft Office 2016:
Adikao ny kaody miseho amin'ity tranokala ity. (https://www.miblocdenotas.com/279692)
Ao amin'ny biraonao PC, kitiho ankavanana ary mamorona antontan-taratasy fanoratana vaovao.
Apetaho ny kaody izay nalainareo taloha ary tehirizo ny rakitra ««activator.cmd»Tsy maintsy ampidirinao amin'ny anarana ireo marika nalaina mba hahafahana mamonjy azy tsara.
Alefaso ny fisie activator.cmd ary avelao aho hanao ny Fampiatoana ny Microsoft Office 2016.
Raha nahatratra an'io teboka io ianao ary nanaraka ny dingana rehetra, dia tokony ho efa azonao izany navaozina ny Microsoft Office 2016. Na izany aza, raha tsy izany no izy ary tsy nahomby ny fampahavitrihana, mamporisika anao aho hanohy hamaky ny fomba manaraka.
Fomba fahatelo: amin'ny alàlan'ny KMS Pico
Para hampavitrika ny Microsoft Office 2016 ary mankafy ny asany, afaka mampiasa ilay fitaovana ianao KMS Peak. Ity fitaovana ity dia tena mora ampiasaina ary tena mandaitra hampiasana birao amin'ny kinova rehetra. KMS Peak es birao mpikatroka 2016 Soso-kevitra indrindra, izy io koa dia heverina ho patch matanjaka indrindra amin'ny famakiana birao 2016.
Azonao atao ampidino ny KMSPico avy amin'ny pejiny ofisialy, mba ho azonao antoka fa misintona sy mametraka ny kinova ofisialin'ny KMSPico hametaka birao 2016.
Dingana handefasana ny mpikatroka birao 2016 feno:
Sintomy ny biraon'ny mpikatroka KMS 2016.
Alefaso ny fisie .exe alaina ary alao antoka fa hikatona ny serivisy rehetra Microsoft Office 2016.
Raha vantany vao mavesatra ny programa, kitiho ny kisary Microsoft Office 2016 ary hanomboka ny dingan'ny famahana. Tsy maninona ny dikantenin'i Office 2016 fa nametraka ianao, na izany aza, dia ho ampandehanana soa aman-tsara. Afaka nametraka ianao Microsoft Office 2016 matihanina miampy 2016 o Fenitra Microsoft Office 2016.
Aorian'izany, ny fonosanao birao 2016 hampavitrika tanteraka ary ny Mpanafika Microsoft Office 2016 KMSPico ho vitany ny asany.
Hamarino fa ny Fampiatoana ny Microsoft Office 2016 vita tsara. Manokatra serivisy Office 2016, kitiho ny rakitra ary safidio ny kaonty.
Ao amin'ny fizarana Fampahalalana momba ny vokatra tokony hiseho ilay hafatra Vokatra navaozina. Raha tsy izany dia nisy zavatra tsy nety ary mamporisika anao aho hanandrana ity fomba ity indray.
Raha aorian'ny fanandramana hafa dia mbola tsy azonao atao ny mampavitrika ny vokatrao avy Microsoft Office 2016, Mamporisika anao hampiasa ity fomba manaraka ity aho.
Fomba fahaefatra: fampandehanana ny Office 2016 Professional miampy sy fenitra amin'ny alàlan'ny Microsoft Toolkit
Ity fomba ity dia tena mitovy amin'ny KMS Pico ho an'ny birao 2016 fa izy io dia vaovao kokoa ary manana interface tsara kokoa. Microsoft Toolkit no anaran'ity fitaovana ity izay hanampy anao hampavitrika ny Microsoft Office 2016. Amin'izao fotoana izao, ity no hany fitaovana mahomby izay mahomby 100% foana. Maimaimpoana, mora ampiasaina ary tsy misy viriosy tanteraka, ka tsy mila miahiahy ianao.
Microsoft Toolkit talohan'ny nahafantarana azy hoe EZ Activator ary novolavolain'ny mpikambana lehibe ao amin'ny Ny fiainako niomerika. Miasa tsara ity fitaovana ity maody ivelan'ny seranana, noho izany dia tsy mila Internet ianao hampavitrika ny Office 2016 anao.
Raha te hampiasa an'ity fitaovana ity dia tsy maintsy aloha ianao Atsaharo vetivety ny antivirusanao. Izany dia satria ny activator dia patch iray izay hanova ny kaody fonosan'ny Office 2016 anao ary hampihetsika azy. Aza manahy, aorian'izany, azonao atao ny mampihetsika ny antivirus anao indray ary manohy miaro ny fiainanao manokana.
Araho ireto dingana ireto mba hampidinana sy hametrahana Microsoft Toolkit hampiato ny Microsoft Office 2016
marary mitsika Microsoft Toolkit avy amin'ny pejiny ofisialy.
Esory ny fisie Microsoft Toolkit.rar izay alainao. Ny teny miafina momba ny fisie .rar dia "official-kmspico.com”. Aorian'ity dia tantano ny rakitra Microsoft Toolkit.exe raha hanomboka ny fandaharana.
Hahita boaty fampitaovana misy ny sary famantarana Office sy Windows eo amin'ny efijery ianao. Safidio ny sary famantarana Office raha hanohy.
Hiseho ny varavarankely pop-up vaovao miaraka amina safidy maro. Tsindrio ny kiheba fampahavitrihana ary avy eo tsindrio EZ Activator. Ity dingana ity dia maharitra segondra vitsy vao vita.
Aorian'izany dia afaka mahita varavarankely hafatra milaza izany ianao Nasaina ny Office 2016.
Amin'izany fomba izany no hihetsika maharitra ny fonosanao Office 2016. Mba hijerena ny satan'ny vokatrao dia manomboha serivisy Office 2016, kitiho File> kaonty> avy eo no ahitanao ny hafatra Vokatra navaozina.
Izany no izy, ity fomba ity dia azonao atao ny mampihetsika ny kinovan'ny Microsoft Office maharitra. Ary koa, ity fitaovana ity dia ampiasaina hampavitrika ny kinova Windows.
Ahoana ny fomba fampiasa ny Office 2016
Amin'ity horonan-tsary tsotra ity dia hianaranao amin'ny fomba tena mora amin'ny fampandehanana ny Office 2016 nohavaozina.
Fanontaniana napetraka matetika momba ny fampiatoana ny birao Microsoft 2016
Azo antoka ve ny mampihetsika ny Microsoft Office amin'ny fampiasana ireo fomba ireo?
Eny, mazava ho azy, ny fampiatoana ny Office avy amin'ireo fomba rehetra ireo dia azo antoka sy azo antoka 100%. Na izany aza, tsy maintsy manaraka ny dingana rehetra voalaza ianao hahazoana antoka fa hahomby ny fizotranao.
Inona no hataoko raha lany andro aorian'ny fotoana fohy?
Raha rehefa afaka kelikely, dia tapitra ny fahazoan-dàlana ary tsy mamela anao hampiasa ny fiasa rehetra, fotoana izao hampiasa activator indray. Manoro hevitra anao aho hampiasa ny fomba Microsoft Toolkit hiantohana ny fahombiazan'ny fampihetsehana ny Microsoft Office 2016.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: LifeBytes » Office » Ahoana ny fomba hampiasana ny Microsoft Office 2016 mandrakizay
Ny rafitry ny mpizara mpanjifa ao amin'ny antsipiriany momba ny database!
Inona ny afovoany? Tantara, fampiharana ary maro hafa